ဦးနှောက်ဆွဲထုတ်ခံလိုက်ရသော ငပိန်းဖွတ်လော်ဘီတွေအတွက် | Dr Ko Ko Gyi's Blog
« Daw Suu please may you kindly stop playing to the gallery of the ultra-Nationalists
နိုင်ငံတကာကို သွားချင်ရင် နိုင်ငံတကာစိတ်ဓါတ်မွေးဖုိ့တော့ လိုတာပေါ့ … “ »
( Pa Yit)
(အကို သံလွင်ရရစ် ရဲ့ အကောင်းဆုံး ပို့စ်တစ်ခုကို
ပြန်လည် Modified လုပ်ပြီးခံစားပါတယ် )
သူရဲကောင်းစစ်သည် ဗိမာန်မှာ လုပ်တဲ့
ခနဲ့ သလိုလို ကလိသလိုလိုနဲ့ပေါ့…၊
ဦးစောမောင် ၊ ဦးသန်းရွှေနဲ့ …၊
စိတ်ရောဂါရနေတဲ့ မင်းတို့ ဖွတ်လော်ဘီပေါက်လေးတွေ..
ပေါက်တတ်ကရတွေကို သနားတောင် သနားလာပီ..
“ဘူမသိ ကိုးမသိ”ဘာတွေပြောနေမှန်းမသိဘူး ..
– ကိုယ့်သားသမီးကို ကျောင်းတောင်မထားနိုင်တဲ့
-တောထဲတောင်ထဲမှာ ငတ်ပြတ်ပီးတိုက်နေရတဲ့ စစ်သားတွေ ..
ကဲ မင်းတို့မှာခေါင်းရှိတယ်ဟုတ် ..စဉ်းစားကြည့်စမ်း..
” ငပိစားတိုက်လာတဲ့တပ်မတော်ကွ” တဲ့
လဖွတ်ပဲ.. ကြားလို့တောင်မကောင်းဘူး ..။
– “မင်းအမေလင်” ကလုပ်တာလဲမဟုတ်
– မင်းတို့ချစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့ တပ်မတော်ကြီးကို
– မင်းတို့တွေ မုန်းပြနေတဲ့ ဒေါ်စုကလဲ လုပ်တာလဲမဟုတ်.၊
မင်းတို့ဦးနှောက်တွေ မချောင်သေးဘူး လို့ငါထင်တယ်..
အဲဒီ ဒေါ်စုရော ငါတို့ရော မင်းတို့ကိုပြောနေတာက
မင်းတို့ အသက်ကို..ငါတို့အသက်လိုပဲနှမျော လို့ပြောနေတာ..
(အဲဒီ ငတ်တယ် ဒုက္ခ မျိုးစုံခံရတယ်..
ကဲ အဲလိုပြောတော့ မင်းတို့က ငါ့ကိုအထွန့်တက်မယ်..
” အငတ်ခံတိုက်နေတာတိုင်းပြည်အတွက်ကွ ..
ခင်ဗျားတို့အေးအေးချမ်းချမ်းနေရဖို့ တိုက်နေရတာ” လို့
အဲဒါဆိုရင် တရားသောစစ် မတရားသောစစ်
မင်းတို့ပြောတဲ့အတိုင်းပဲ ဟုတ်ပီ ..
အဲဒီလို မင်းတို့လို တိုင်းပြည်နဲ့ လူမျိုးအတွက် ..
၁။ မဝရေစာ စားပီး သေသေရှင်ရှင် တိုက်ရတယ်
၂။ တိုက်ပွဲအတွင်းကျည်ဆန် နဲ့ လူအင်အား
ကဲ အဲဒါဆို အဲလိုဖြစ်အောင်လုပ်ထားတဲ့
ထိပ်ပိုင်းက နွားကြီးတွေကရော ကောင်းနေလား ?
လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ် ၄၀ လောက်က တပ်မတော်နဲ့
လက်ရှိတပ်မတော် နဲ့ပဲ ယှဉ်ကြည့်ကြစမ်းပါကွာ…၊
ဇိမ်ကျနေတယ်ဆိုတာ.. မင်းတို့ သိမှာပါ..
“မင်းတို့ကို နွားတွေလို အမိန့်ပေးပီးကြိမ်တို့ခိုင်းနေတဲ့..
ဝေဖန်နေခဲ့ တော်လှန်နေတဲ့ ၊ ကန့်ကွက်နေတဲ့ ..
ငါတို့ဒီမိုတွေနဲ့ ပြည်သူပြည်သားတွေက မှားလားကွာ ?
လူဆိုတာ မွေးရာပါ အခွင့်အရေးရှိတယ်..
” သတ္တိရှိလို့စစ်ထဲဝင်တာ” တဲ့
” ငါတို့ဟာနွားတွေမဟုတ်ဘူး ကျားကွ “ဆိုတဲ့
ချော့တခါ ခြောက်တလှည့် အခိုင်းခံထားရတာမို့
အသားကျနေပီ ..ချက်ချင်း ပြန်လှန်မပြောရဲတာ..
မိန်းမလိုမိန်မရ မဟုတ်သုတ်ခ သတင်းတွေဖြန့်..
“စစ်ခွေး”..လို့ပြောတာ နာဖို့မရှိနဲ့ ..
မျက်ရည်ခြူတာဟာ ဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ ..
အေး ငနူစကူလေးတွေကိုပဲ အဲလိုသွားပြော..
မင်းတို့ကို မှန်တယ်ကွ ပြောလိမ့်မယ် ..
ချတော့ဘာဖြစ်လဲ သေပေါ့ ..
ဒါပေမယ့် ချဖို့အားပေးတဲ့အထဲမှာငါမပါဘူး ..
မင်းတို့စိတ်ထဲမှာ အဲလို စောက်ကျင့်တွေရှိနေသ၍
ဆယ်ခုနှစ်များစွာ ဖော်ပြခဲ့တယ် ..
ကဲ အခုအဲဒီစကားတွေကို .
ဘယ်” သူတောင်းစား”ကတာဝန်ခံရဲလဲ .
အမြဲတမ်းရန်သူ အမြဲတမ်း မိတ်ဆွေမရှိပါဘူး..
ပြီးပြီးရော လျှောချမလို့လား ..?
ခဏတာရန်သူ ခဏတာ မိတ်ဆွေမရှိဘူး ..
အမြဲတမ်း သူ့ကိုလဲ ကိုယ့်လိုသဘောထားတဲ့
သာတူညီမျှ တန်းတူ ကောင်းစားရေး” ပဲရှိတယ်လို့ယုံကြည်တယ် …
ရန်သူဖြစ်နေတုန်းမို့ ဝါဒတွေဖြန့်မိတာပါ …
နှိပ်စက်မိတာပါ ဆိုရင်..ဒါကတည့်နေတုန်းမို့ ပြောတာမျိုးဖြစ်တယ် ..
ခုနောက်ပိုင်း ဦးသိန်းစိန် တို့ ကာချုပ်တို့..
– ဒေါ်စုလဲကရင်အကျီ င်္ဝတ်တာပဲ ..
– ကာချုပ်လဲ ဝတ်တာပဲ ..
ဒေါ်စုရဲ့အသိုင်းအဝိုင်း ဟာ ..
သမိုင်းမှာ တခါမှ KNUကို မစော်ကားခဲ့ဘူး ..
KNU က လဲ..ဒေါ်စုကိုဖက်က
KNU ကောင်းတယ် ပြန်ဖြစ်ပြန်ရော ..
ဇာတ်နာပြကြအုံးမှာကိုလဲ ငါက သိနေတယ်..၊
ငါပြောတာက အရင်လို KNU မကောင်းဘူး
မြောက်ပိုင်းနယ်စပ်တွေမှာ စစ်တပ်နဲ့ ကေအိုင်အေနဲ့..
မင်းတို့တွေရဲ့..အထက်ကနေ အမျိုးမျိုး လုပ်နေရင်..
ဗလောင်း ဗလဲ လုပ်တဲ့
This entry was posted on December 8, 2014 at 4:09 am and is filed under Uncategorized.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.
One Response to “ဦးနှောက်ဆွဲထုတ်ခံလိုက်ရသော ငပိန်းဖွတ်လော်ဘီတွေအတွက်”
December 8, 2014 at 8:07 am | Reply
December6at 4:46pm ·
မြန်မာနိုင်ငံမှာ အမျိုးသား ဦးရေ ထက် အမျိုးသမီး ဦးရေက ပိုများပါတယ်။
ပျမ်းမျှ သက်တမ်းအားဖြင့်လည်း ဒီလိုပါပဲ။ အမျိုးသမီးများ ပိုပါတယ်။
အရေအတွက် တူတယ်လို့ပဲ အားနာ ပါးနာ နဲ့ ယူဆပေးပါစေအုံးဗျာ။
ဘာအလုပ်မှ မလုပ်ပဲ ထိုင်စားနေတဲ့သူ ၊ ၅သိန်းရှိတယ်။ (လျှော့ပေါ့တွက်ပေးတာနော်)
တောထဲ တောင်ထဲမှာ သွားလာနေရသူတွေ ဘဝမြုပ်ထားသူ ၅သိန်းရှိတယ်။ (အဖိတ်အစဉ်အနည်းငယ်ရှိမှာပေါ့ဗျာ။) ထားအုံးတော့။
သူတို့ ၁ဝသိန်းနဲ့ ညီမျှတဲ့ အမျိုးသမီး ၁ဝသိန်းအတွက် ဘာစီစဉ်ပေးမလဲ၊
လူတွေနော် အသွေးနဲ့ အသားနဲ့၊
ဒီအပြင် သာမန်လူတွေထဲမှာတောင် လက်ကြောတင်းအောင်အလုပ်မလုပ် ပဲ ရပ်ကွက်ထဲ ဟိုနားဆရာလုပ် ဒီနားဝင်ပါလိုက်နဲ့ အလေနတော ၁ဝ၉၊ ၁၁ဝ တွေ ဒုနဲ့ ဒေးရှိနေပြန်တယ်။
မနက်မိုးလင်းရင် ဆန်အိုးကို ခြေနဲ့ကန်ပီး မလှုပ်ရင် ပြန်ဆက်အိပ်တဲ့ကောင်တွေ အုပ်နဲ့ သင်းနဲ့ ရှိနေသေးတယ်။
တနေ့လုံး ရှာပြီး သားပိုက်ဆံကို ၂လုံး ၃လုံး နဲ့ သေရည်တမျှ မျှ လုပ်တဲ့ကောင်တွေ အုံလိုက် ကျင်းလိုက် ခိုနေပြန်တယ်။
ဒါတောင် တလင်တမယားပါလို့ အော်ပြီး ဇိမ်ခန်းနဲ့ ဆောင်ကြာမြိုင်တွေ ပိုတိုးသထက်တိုးလာတယ်။ အော်တဲ့သူတိုင်း ကြည့်လိုက် အောက်တန်းစား ကလေကချေတွေ သာ များတယ်။
တလင်တမယား စနစ်အောက်မှာ လင်မပေါ် မယား မမည် တွေ့ရာပျော်လို့ ကြိုက်တာ ဆော်တဲ့ လူတွေက အမျိုးဘာသာစောင့်ရှောက်အုံးမယ်ဆိုပဲ။
အဲ့ဒီ အချိန် မနက် ၃နာရီလောက် အစောမှာ သီရိမင်္ဂလာဈေး၊ ကမ်းနားဈေး၊ လမ်းတွေ ဥဒဟိုမှာ မိန်းမသား တွေ လှုပ်ရှားရုန်းကန်နေကြတယ်။ ပဲပြုပ်ဆိုပြီး အော်လိုက်တဲ့အသံကစလို့ ရုံးပြန် ကားစောင့်ရင်း အိမ်မှာ ဘာချက်ရမလဲ ဆိုတဲ့ သောက ကိုယ်စီနဲ့ အမျိုးကောင်းသမီးတွေ အတွက် ရင်နင့်ဖွယ်ရာ မြင်နေရသေးတယ်။
ဝမ်းရေးတထွာတွက်ပါ၊ ကွဲနေတဲ့မိဘတွေအတွက်၊ နေမကောင်းတဲ့ အဖေ့အတွက်၊ ဆေးရုံတက်နေတဲ့ အမေ့အတွက်၊ သားလေး သမီးလေးတွေ အတွက်ဆိုတဲ့ အချက်တွေများစွာ အတွက် အံကိုကြိတ်ပြီး မျက်ရည်မထွက်အောင် ထိန်းရင်း ကိုယ်ခန္ဓာကို အပ်ကာ ရောင်းချရင်း လူတကာ့မျက်လုံးတွေအောက်မှာ ပေးဆပ်နေတဲ့ ခေတ်သစ် ကျွန်စနစ်ရဲ့ သားကောင် ခြေနင်းကျောမွဲ မိန်းမသားတွေရှိသေးတယ်။
ညစ်ထေးပြီး မသန့်ရှင်းတော့တဲ့ ခန္ဓာကိုယ်မှာ ဖြူစင်လွန်းတဲ့နှလုံးသားလေးတွေ အတိုင်းသားနဲ့ သူတို့ဘဝကို ယောကျာ်း တယောက်ရဲ့ အရိပ်အောက်မှာ ရှင်သန်လိုတဲ့ မိန်းမဆန်တဲ့ အိပ်မက် ကိုယ်စီ သူတို့မှာရှိကြတယ်။
နွမ်းလျလျပိုက်ဆံလေးတွေစုပြီး ပွဲစားလက်အပ်လို့ ဘဝရောင်ချီ ပွင့်လင်း နိုးကောင်းပါရဲ့ဆိုတဲ့ အတွေးမှားနဲ့ တရုတ်မယား၊ ထိုင်းလုပ်သားဖြစ်နေကြတဲ့ မိန်းကလေးငယ်၊ လတ်၊ ကြီးများစွာရဲ့ အိမ်ပြန်ချင်တဲ့ ဆန္ဒနဲ့ ညစဉ် ထွက်နေတဲ့ ငိုရှိုက်သံ သူတို့ဘာသာစကားနဲ့ ကာယကံရှင်တို့သာ နားလည်လေရဲ့။
လက်ကြောမတင်းတဲ့ လူမျိုး၊ ကို့ထက်သာ မနာလိုတတ်တဲ့စရိုက်၊ ကြီးနိုင်ငယ်ညှဉ်း အကျင့်၊ တွေကြားမှာ ဘာသာတရားကိုင်းရှိုင်းမှုဆိုတဲ့ အပျိုစင်ဟာ နေ့လည် ချိန် လူတကာရှေ့မှာ မုဒိန်း ကျင့်ခြင်းခံလိုက်ရတယ်။ ဒါတောင် သာဓုဆို မပျက်ကြဘူး။
ခုတ်ရာ တခြား၊ လျှရာ တလွဲဖြစ်နေတဲ့ ဒီ လူ့အသိုင်းအဝိုင်းရဲ့ တလွဲဆံပင်ကောင်းမှုနဲ့ မှားယွင်းတဲ့ စနစ်ဆိုးတွေဟာ ကိုယ့်သွေးကိုယ်လျက်ရင်း ပျော်နေကြတဲ့ လူ့အသိုင်းအဝိုင်းဖြစ်လာတယ်။
အမျိုးဘာသာ သာသနာ ဆိုတဲ့ စကား၊
ဧည့်သည် အိမ်ရှင်ဆိုတဲ့ စကားတွေနဲ့ အတူ အနာဂတ်သားမြေးတို့ အံကြိတ်ရင်း ဆက်ခံကြအုံး၊
ကိုယ်ပြုသောကံ ပဲ့တင်သံ မလွဲ ပြန်လာမည်။
ဘယ်သူမပြု မိမိမူဆိုတဲ့ စကားတွေကို တသွင်သွင်ကြားယောင်ရင်း သင်ဟာ သင့်လူမျိုးကို တကယ်ချစ်လို့လား၊ သင့်ဘာသာတရားကို တကယ် ချစ်လို့လား၊ သင့်နိုင်ငံကို တကယ်ချစ်လို့လား၊ ချစ်သေးရင် အပြေးလိုက်အုံး၊ ……… ဟိုးရှေ့ ၂မှတ်တိုင်လောက်မှာ မှီနိုင်ကောင်းပါရဲ့။